DOWNLOAD Grumman C1-A muzvinashawo FSX & P3D - Rikoooo
Created 07-10-2016 03: 44: 02
Akachinja 07-10-2016 21: 59: 42
Munyori: Milton Shupe, Scott Thomas, Kutendeuka kubudikidza Eagle Rotorcraft Simulations http://www.eaglerotorcraftsimulations.com
Senguva dzose panyaya Milton Shupe uye chikwata chake mugumisiro uri hunoshamisa, realism uye hwakajeka mashoko varipo, hombe chokuvonga kuna Eagle Rotorcraft Simulations kuti kutendeuka kuna FSX / P3D. Complete rongedza pamwe 3 repaints, tsika ruzha, nemamwe gauges, HD textures, yaishandiswa muswe haka (unofanira kutanga basa kiyi kuti kiibhodhi kuti Activate naro) uye nezvimwe zvinhu zvizhinji.
The Grumman C-1 muzvinashawo ari muchiuto nezvifambiso ndege rinobva S-2 Tracker. musiyano wezvinyorwa ichi pakutanga nendege 19 January 1955 uye basa gore rakatevera. Makavakwa pamusoro 80 nendege uye United States Navy ndiye chete user. The C-1 muzvinashawo ari pamudyandigere muna 1988 pashure pemakore anopfuura 30 yebasa. (Wikipedia)
Grumman C1-A muzvinashawo FSX & P3D Download
Downloads: 9 228
Downloads: 14 135